Dingana 7 hamoronana horonantsary Marketing Killer | Martech Zone
Manamboatra an animé video ho an'ny iray amin'ireo mpanjifanay amin'izao fotoana izao. Manana mpitsidika an-taonina maro izy ireo tonga ao amin'ny tranonkalany, saingy tsy mahita olona mifikitra ela loatra izahay. Mpanazava fohy no fitaovana tonga lafatra hametrahana ny volavolan-kevitr'izy ireo sy ny fanavahana ny mpitsidika vaovao amin'ny fomba mahavariana.
Mampiseho ny fikarohana fa nitombo be ny fangatahan'ny mpanjifa ny atiny video, miaraka amin'ny 43% maniry hahita horonantsary misimisy kokoa avy amin'ny mpivarotra. Ny horonan-tsary sy ny atiny mihetsika dia nanjary manan-danja tokoa amin'ny fizotry ny fiovam-po, miaraka amin'ny 51.9% ny mpivarotra milaza fa manana ny ROI tsara indrindra ny video raha ampitahaina amin'ny karazana atiny hafa. Raha ny marina dia mitarika mankany ny pejy fandraisana an-tanana misy horonan-tsary 800% fiovam-po bebe kokoa. MicroCreatives
MicroCreatives, masoivohon'ny famoronana mpamorona serivisy ho an'ny serivisy feno, namokatra ity sary feno fahitana ity - Fomba 7 hamoronana horonan-tsary famonoana mpamono olona - izay tokony hanampy ny orinasa na ny famoronana hanombohana ny tetikasan-dry zareo voalohany. Ny infographic dia mamakivaky ireo dingana ilaina amin'ny fampivoarana ny tetikasanao horonantsary manaraka.
Ireto ny dingana 7 hamoronana horonantsary Marketing Killer
Fantaro ny horonan-tsarinao tanjona sy mpihaino kendrena
Safidio ny tsara karazana horonan-tsary afa-po ho an'ny tanjonao
Tazomy izany fohy
Afovoaho izany a tantara marika
Manapaha hevitra amin'ny aiza no apetraka ny horonan-tsarinao
Mandrefy sy mamakafaka fampisehoana
Ankasitrahako marina fa natombok'izy ireo tao an-tsaina ny tanjona ary nifarana tamin'ny fandrefesana ny fahombiazan'ny ezaka!
Tags: ahoana nohoronantsary marketingLahatsary Marketingmicrocreativeseny-dranomasinaFilipinadinganaYouTube